Saraakiisha ciidanka ammaanka ee Puntland oo soo bandhigay nin hore uga tirsanaa Al-shabaab, balse ka baxay. – Radio Daljir
Saraakiisha ciidanka ammaanka ee Puntland oo soo bandhigay nin hore uga tirsanaa Al-shabaab, balse ka baxay.
Garowe, Sept 08 – Saraakiisha ciidanka ammaanka ee Puntland ayaa maanta saldhiga dhexe ee Garowe ku soo bandhigay nin dhalinyaro ah, oo lagu magacaabo C/risaaq Axmed Xirsi, oo hore uga tirsanaan jirey xarakada Al-shabaab ee ka hawl-gasha qeybo ka mida koonfurta Soomaaliya.
Habkii uu Al-shabaab uga baxey iyo cafis la sheegey inuu u fidiyay M/weynaha dawladda Puntland C/raxmaan Maxamed Faroolle ayaa waxaa warfidiyeenada u sharxay Taliye ku xigeenka ciidanka bilayska & asluubta ee Puntland G/Sare C/llaahi Saalax Maxamed.
Taliye Saalax ayaa sheegey in M/weyne Faroole uu cafis u fidiyay saqsiyaad badan oo ururkaasi ka tirsanaa, waxaana uu hadalkiisa raaciyay in ay weli fursadaan u furun tahay qof kasta oo doonaya in uu Al-shabaab isaga baxo.
C/risaaq Axmed Xirsi oo tafaasiil ka bixiyey ka mid ahaanshaha Al-shabaab, muddadii uu ka ka tirsanaa, iyo waxa ku kalifay in uu ka baxo, ayaa tilmaamey in shaqsi ahaantiisa uu go’aan ku gaarey in uu isaga baxo ururkaasi, markii hore ee uu ka mid noqonayayna aysan jirin cid ku khasabtay ee isagu uu doortay.
Caaqil C/laahi Maxamed Aw-ciise oo ka mid ah duqayda dhaqanka ee beesha uu ka soo jeedo C/risaaq Axmed Xirsi ayaa ka waramay dadaalada xooggan ee uu u galay in uu xarakada Al-shabaab ka saaro C/risaaq oo ka tirsanaa qeybta dacwada ee xarakada Al-shabaab. Caaqilka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegey inuu muddo faro badan uu baadi goobayay C/risaaq balse markii danbe uu ku guuleystey inuu ka saaro ururkaasi.
Ma aha markii ugu horaysey oo saraakiisha ammaanka Puntland ay soo bandhigaan dad la sheegey in ay hore uga tirsanaayeen xarakada Al-shabaab.
Waxaa isla saldhiga Garowe maanta lagu soo bandhigey 18 maxbuus oo lagu soo qabtay dagaalkii todobaadkii hore ka dhacay Gaalkacyo kuwaas oo laamaha ammaanka Puntland ay ku tilmaameen in ay qayb ka yihiin kooxda Al-shabaab ee colaada ka hurinaya magaalada Gaalkacyo.
Maxamed C/laahi Cali ‘Kooshin’,